Cimilada cimilada ayaa jirta | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira waqtiyo sanadka ah oo ay dadku dareemaan niyad jab badan, u nugul una nugul xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin. Qaar badan oo ka mid ah xaaladahan ayaa dhici kara isbeddelo waqti ka dib.
Waxyaabo kala duwan sida saacadaha maalinta ee dhamaadka maalinta, isbeddelada xilliyeed, haddii ay maalin qoraxdu tahay iyo haddii ay ka yar tahayba waxay mas'uul ka yihiin qaar ka mid ah xanuunnada saameynta leh ee dadka ku dhaca. Waxaa loogu yeeraa cilladaha xilliyeed ee saameynaya xilliyada oo badanaa saameeya qiyaastii 15% dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, tani way ka badan tahay, laakiin waxaa jira boqolkiiba in yar oo dadweynaha ah oo muujinaya nooc ka mid ah argagaxa ama argagax ka hor ifafaalooyinka saadaasha hawada qaarkood ee dhaca xilliyada sanadka. Waa wicitaanada cimilada cabsi leh
1 Cimilada cimilada
2 Calaamadaha lagu garto dadka u xanuunsada
3 Sababaha ugu waaweyn ee cuqdada cimilada
4 Daaweynta dadkaas
Tusaale ahaan, waxaa jira nooc ka mid ah cabsi-xumida saadaasha hawada, taas oo dadka intiisa badan ay u tahay xaalad qurux badan ama xaalad jacayl oo lamaanayaasha, sida cabsida bisha buuxda (selenophobia). Cabsida kale ee iyaduna layaabka leh ee dadka badankooduna yihiin qurux iyo qaddarin waa cabsi-qabashada waaberiga (eosophobia) iyo nalalka waqooyiga (auroraphobia).
Mar Gomez, waa aqoonyahan cilmiga saadaasha hawada Waqtigu waa waxayna sharaxday qaar ka mid ah cilladaha nafsiga ah ee ay dadkaasi la kulmaan. Maxaa qof walba u qurux badan oo lagu amaani karo, waayo dadkani waxay u yihiin walwal. Caadi ahaan, cabsidan waxaa sabab u ah sababo qaarkood oo qofka u horseeda inuu la kulmo xaaladahaas welwelka dhabta ah. Sidaa darteed, Mar waxay ku talinaysaa in dadka ka cabanaya cuqdadda noocan ah ay isku dhiibaan gacanta khabiiro takhasus leh oo aan waligood isku dayin inay kaligood la kulmaan cilladaan oo kale.
Calaamadaha lagu garto dadka u xanuunsada
Si loo aqoonsado qof u xanuunsanaya cuqdad noocan oo kale ah, daraasado iyo baaritaanno kala duwan ayaa waxaa sameeyay dhakhaatiirta cilmu-nafsiga iyo daaweeyaha. Cabsidaas badanaa waxaa weheliya dhacdooyin isbeddel ama tachycardia ah. Guud ahaan, qofka ku xanuunsada wuxuu dareemayaa inuu garaaca wadnahiisu si dhakhso leh u socdo, wuxuu bilaabaa dhidid aad u badan tanina waxay u horseedaa wadno garaac oo noqon kara khatar ku ah caafimaadka.
Dhibaatada ay leedahay cabsidaas, sida kuwa kale oo badan, ayaa ah in badanaa lagu qaado si qarsoodi ah. Dadka intiisa badani way ka xishoodaan inay faallo ka bixiyaan oo ay u sharraxaan cabsida ay dadka kale u qabaan iyaga oo ka baqaya in lagu maadsado ama dadka kale aan laga aqbalin. Taasi waa sababta dhibaatooyinkaas aan si fiican loo aqoon. Waxay u badan tahay in jahligan baahsan awgood, tirada dadka la ildaran cabsidaas ayaa ka weyn inta la ogyahay.
La saadaasha hawada, ee kor lagu magacaabay, wuxuu la xiriiraa isbeddelada xilliga, saacadaha qorraxda, iwm. Taasi waxay sababtaa isbeddelo niyadda dadka. Waxay saameeyaan 15% dadka waana caadi yihiin. Qaar ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada ayaa sidoo kale mas'uul ka ah jirrooyinka jir ahaaneed qaarkood sida xanuunka kala-goysyada, murqaha, dhanjafka iyo kuwa kale.
Sababaha ugu waaweyn ee cuqdada cimilada
Waxaa ka mid ah dhaxalka. Haddii hooyo ama aabbo ay ku dhacaan, waxaa jirta fursad ay jiilka soo socdaa sidoo kale ku yeelan doonaan. Waxay sidoo kale u jiraan sababo nooc ka mid ah dhaawacyada ku dhaca nolosha qofka lala xiriiriyo khibrad xun maalmaha roobka culus, dabaysha, ama dayaxa oo buuxa.
Badanaa cabsidaas waxay ku dhacdaa da 'yar, ilaa shan sano waxaana ugu caansan cabsida bisha buuxda, danab, roob culus ama duufaanno. Kuwa dambe ayaa xoogaa shuruud ku leh shineemada. Inta badan filimada naxdinta leh, goobaha ugu cabsida badan iyo kacsanaanta muuqaalku waa mugdi, oo leh dayax buuxa, ama danab.
Si loo daweeyo cabsidaas, waxaa jira daaweynno kala duwan. Waxaa ka mid ah daaweynta garashada. Waxay ka kooban tahay bukaanku inuu ka helo shaqaalaha takhasuska leh dhammaan macluumaadka ku saabsan ifafaalaha ay ka baqayaan, sidaa darteed habkaas, bukaanku wuxuu u arki karaa inuu yahay wax aan dhib lahayn oo uu u arko cuqdaddooda inay tahay wax aan caqli gal ahayn.
Midkale ayaa ah daaweynta soo-gaadhista tartiib tartiib ah taas oo bukaanku si tartiib tartiib ah ugu wajahayo astaamaha saadaasha hawada ee su'aasha laga qabo, isagoo leh xaalado uu shaqsi ahaan ugu soo arko. Tusaale ahaan, haddii aad ka baqeyso hillaac, si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaq dhinaca daaqadda si aad u aragto adigoo dareemaya badbaado iyo badbaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Cimilada cimilada ayaa jirta
Jarmal waad salaaman tahay! Runtii waan jeclaaday qoraalkaaga waxayna iisoo heshay macluumaad cusub oo kusaabsan saadaasha hawada, runtu waxay tahay inaanan waligey u maleynin in qof cabsi cabsi aan macquul ahayn ka qabin qaar ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada ... laakiin xaqiiqdii way jiri karaan. Midka aanan sifiican u fahmin sida loo horumarin karo waa Eosophobia, cabsida soo bixida qorrax ka soo baxa, taasi waa, daqiiqaddee ayaad ku soo baxdaa cabsidaas? maxaa yeelay runtii way igu adag tahay inaan fahmo, malaha cidina ma haysato ama waxay ka dhacdaa uun noocyada kale ee bulshada oo qorraxdu u soo baxdo macnaheedu tahay wax ka duwan ... Ma aqaan. Haddii aad ogtahay kiis kasta waxay noqon laheyd mid xiiso leh.
Inta kale cabsida ayaa iila muuqata macquul, aniga oo ka baqaya duufaanno waxaan u maleynayaa inay caadi ku noqon karto waddan sida Isbaanishka ah oo masiibooyinku ka dhacaan waqti ka waqti sababo la xiriira qabow ama roobab mahiigaan ah (Biescas…).
Waa inaad sameysaa maqaal kale markii dadku soo jiitaan mid ka mid ah ifafaalahan, sida ugaarsadaha duufaanka, in riyadooda kaliya ay tahay inay ku dhex jiraan duufaan.
Shaqo wanaagsan waadna mahadsan tihiin.
Gerardo wanaagsan, aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga iyo xiisahaaga. Waxaan u maleynayaa in haddii cabsida qaar ay ku dhacdo jahwareer carruurnimo awgood, waxay noqon kartaa in dadka qaarkood oo ay u muuqato inay cabsi qabaan cabsida qorrax ka soo baxa ay ka soo kaceen waayo-aragnimo naxdin leh oo qorrax-soo-baxa ah ee asalka ah.
Waxaan kaa qaatay fikradda, way fiicnaan laheyd inaan qoro qoraal ku saabsan dadka soo jiitay dhacdooyinka saadaasha hawada.
Maxaa Dhaca Marka Barafka Antarctic Dhalaalo